ကုန်ကားသမားတွေရဲ့ ဒုက္ခ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကုန်ကားသမားတွေရဲ့ ဒုက္ခ
Posted by ကြောင်လေး on Oct 15, 2011 in Creative Writing, Critic | 13 comments
ဗွီအိုင်စီမှာပါတဲ့ယာဉ်တန် ကုန်တန်ကိုပဲ လက်ခံပြီး တချို့နေရာတွေမှာ
လို့ဆိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရသလဲဆိုရင်၊ သူတို့ကားတွေဟာ
အော်ရီဂျင်နယ်အတိုင်းမဟုတ်ပဲပြုပြင်ထားကြတာပါ။ ကားတစ်စီး ကို
၀ယ်လာပြီးရင် ဖရိန်ကိုပိုမိုတောင့်တင်းအောင် ထပ်ပိုးကြပါတယ်။
တယ်။ အဲဒီအခါမှာယာဉ်ရဲ့တန်ချိန်ဟာ ကုန်မတင်ရသေးပေမဲ့
ယာဉ်မှတ်ပုံတင်မှာပါတဲ့ ယာဉ်+ ကုန်ရဲ့ တန်ချိန်နဲ့ညီသွားတဲ့အတွက်
ဆိုတော့ ကားတစ်စီးကိုသူတို့ဝယ်ထားရတဲ့ဝယ်ရင်းဈေးနဲ့ ဒီကားကို
ဥပမာ ကားတစ်စီးကိုသိန်းတစ်ရာရင်း ၀ယ်ထားပြီး လုပ်စားလို့
သိန်းသုံးရာနဲ့ပေးဝယ်ထားရတဲ့ကားဟာ တစ်ခေါက်ကို ငါးသိန်းလောက်
မြတ်သင့်တာပေါ့ ။ အဲဒီမှာဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့၊ အာစီယံစံနှုန်းနဲ့ပဲ
ဖြစ်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မတန်တဆဲ့ဈေးနဲ့ ပေးဝယ်ထားရတဲ့
တွေမှာ မောင်းဖုိ့ဆိုရင် ကားရဲ့ခံနိုင်ရည်အားကို ပိုမိုကောင်းဖို့အတွက်
မလုပ်ပဲ အော် အတိုင်းမောင်းမယ်ဆိုရင်ကားဟာအချိန်မတန်ခင်မှာ
လာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ယာဉ်တန်ချိန်တက်လာတဲ့အတွက် ကုန်တင်တဲ့
အာစီယံစံနှုန်းအတိုင်းကုန်တင်ခိုင်းမယ်ဆိုရင် လမ်းကိုလဲ အာစီယံလမ်း
ဒင်းတို့ ပြောပြန်လျှင်လည်း ဒေါကန်ဦးမယ် သူတို့က သူများ အာဆီယံဆိုလို့ ယောင်ဝါးဝါးလိုက်လုပ် … စစ်ချင်တဲ့ကားကိုစစ် ၊ မစစ်ချင်တဲ့ကားကိုလွှတ်နဲ့…. အဲ့ဒီဝန်ပိုတင်တဲ့ကိစ္စလည်း ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်တော့ အောင် မြင်မယ် မထင်မိဘူး .. ။
ကားသမားတွေ အတွက်တင် မဟုတ်ပါဘူး
ကုန်သည်တွေ အတွက်ပါ ဒုက္ခဖြစ်စေပါတယ်
တန်ဆာခ တွေ တက်လာမှာ အသေအချာမို့ ပါပဲ
အဲဒီခါကြ ကုန်စည် ပေါ်မှာပဲ ဈေးနှုန်းတင်မှာပါ
ဒီအတွက် စားသုံးသူ ဆီမှာပဲ နောက်ဆုံး ဘူတာဆိုက်ပါမယ်
နောက်ပြီး ကားဂိတ်တွေ မှာ ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်သားများအနေနဲ့ လဲ
ဝင်ငွေ လျော့သွားမှာ အသေအချာပါပဲ
အဲလောက်ဖြစ်နေရင်လည်း ကုန်ကားပိုင်ရှင်တွေပေါင်းပြီး အထက်လူကြီးတွေကို အချက်ကျကျ တင်ပြကြပေါ့…အဲဒါမှ အဆင်မပြေရင် တပါတ်လောက် ကားမထွက်ဘဲ Strike လုပ်ကြပေါ့…မီဒီယာပါ ပါလာပြီ ဆိုရင် လူကြီးတွေလဲ အဆင်ပြေမဲ့အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ပေးရတော့မှာပါ…
တန်ဆာခဈေးကတော့ မီးတို့ မူဆယ်မှာ အရင် တန်ပို မသတ်မှတ်ခင်က ကားခ ၁ ပိဿာ 60/ ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ အခု တန်ပို သတ်မှတ်လိုက်တော့ 115/- ကျပ်လောက်ဖြစ်သွားတယ် … ပစ္စည်းတင်ရတာလဲ အခက်အခဲတွေရှိလာတယ် …. တန်ပိုသတ်မှတ်တာလဲ ဘယ်နှစ်ခေါက်မြောက်ရှိနေပြီလဲ မသိ…. သတ်မှတ်လိုက် ပြန်ဖျက်လိုက်နဲ့ ……
အရေအတွက်များပြီး အရေအသွေးမရှိတဲ့ လမ်းတွေ …
အင်းစိန်က အောင်ဇေယျတံတားလားမသိဘူး တစ်ခါအဲဒီလမ်းကမောင်းဘူးတယ်
လှိုင်သာယာဘက်အဆင်းမှာ ချဉ့်ကပ်လမ်း မြေသားတွေကျွံကျ နေတာတွေတော့
တော်တော် လန့်သွားတာနဲ့ အဲဒီတံတားဘက်က လုံးဝမသွားတော့ဘူး
ပြောတော့အာစီယံတဲ့လမ်းကချာတူးလန်နေတာဘဲမယုံရင်ပဲခူးနဲ့ ပျဉ်းမနားလမ်းအတွင်းထဲကလမ်းကိုကြည့် 
ပါလား။ လမ်းကပိုက်ဆံကောက်တဲ့သူတွေလည်းသူတို့ မို့ လို့ မရှက်တယ်လူကြီးတွေကမသိတာလားမသ်ိချင်
ယောင်တောင်တာလားမသိပါဘူးအဲဒီလမ်းကသူတို့ မသုံးဘူးလေဘယ်သိပါ့ မလည်းမသိဆိုလို့ တခုသတိ
ကားလမ်းကပြန်ခဲ့ရတယ်မြောင်းမြကိုပြန်ချင်လို့ ပြန်တာမဟုတ်ဘူးနော်နေစရာမရှိလို့ ကားတောင်ကောင်း
ချင်လို့ နောက်ရက်TVသတင်းကြည့် တော့သူကလမ်းသိချင်လို့ အောက်ကသွားခဲတယ်ဆိုဘဲ(လိမ်ပုံလိမ်ပုံ)
ပြီးတော့ မှနောက်ရက်တွေမှာဆောက်လုပ်ရေးကိုလမ်းမြေပုံတွေကြည့် လမ်းတွေဖေါက်မယ်ဆိုပြီးလုပ်ခဲ့သေး
တယ်လေသူတို့ မို့ လို့ အာစီယံစံနှုန်းလို့ ပြောထွက်တယ်
အတိုင်းလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမီဒီယာတွေဝိုင်းရေးဖို့.လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုသာမီဒီယာတွေ ၀ိုင်းရေး ပေးမယ်ဆိုရင်လွှတ်တော်ဆိုတဲ့စားပွဲခုံကိုအော်တိုေ၇ာက်သွားမှာပါ။ဒါဆိုရင်တော့အနှေးနဲ့. အမြန်တစ်ခုခုထူးခြားလာမယ်လို.ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်သိသလောက်အကြံဝင်ပေးကြည့်တာပါ။
ကိုစမာကက်လေး တို့ ကို ပီအမ် ပို့ထားတာ ကြာပါပြီ။
ခု ပေ့ခ်ျ ရဲ့ အပေါ်ဆုံးက အပြာရောင် အတန်းကြီး မှာ ” FORUM ” ဆိုတာတွေ့မှာပါ။
အဲဒါကို “click” ပီးတော့ ဖိုရမ် ပေ့ခ်ျ မှာ “Log out ” ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးရဲ့ အောက်နားမှာ စာအိပ်ပုံလေး
တွေ့ရင် ” click ” လိုက်။ အဲဒီဟာ ဘရာသာ ရဲ့ ပီအမ် “စာအဝင်”ဘဲ။ အဲဒီမှာ ပို့ထားပြီးသားပါ။
အာစီယံစံနှုန်းအတိုင်း ကုန်တင်တာက လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့် ကိစ္စပါ ။
အားလုံးခံသာအောင် ညင်ညင်သာသာဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲက စဉ်းစားစရာပါ ။
အာစီယံစံနှုန်းအတိုင်း ဆောက်ထားတဲ့ အဝေးပြေးလမ်းတွေမှာ
အာစီယံစံနှုန်းညီတဲ့ကားတွေပဲပေးမေါင်းပေါ့ မကောင်းဘူးလား ။
98 နောက်ပိုင်းတော့ ကတ္တားတွေက ပိဿာလေးနဲ့မချိန်တော့ဘူး ဒစ်ဂျစ်တယ်ချိန်ခွင်တွေပေါ့နော
ယာဉ်တစ်စီး ချိန်ပြီးတာနဲ့ နှုန်းထားက အလိုလျှောက် သူ့မူရင်းစာရွက်ပိုင်းလေးနဲ့ထွက်လာတာဘဲ
အခြားစာရွက်ပိုင်းလေးမှာ လက်ရေးနဲ့ ရေးချင်သလောက်ရေးပြီး
ကြာပါပြီ 98 တုန်းကပါ ခုတော့မသိဘူး
ကြောင်သေးသေးလေးရေအဲလိုကောင်တွေရဲ့ အောက်မှာတော့လုပ်မစားဘူးဘာလို့ လည်းဆိုတော့ သူတို့ 
ကအာဏာနဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့သူလေ ကြောင်သေးသေးလေးခေါင်းကြီးကြီးနဲ့ တွေးပါနော်တွေ့ လားဒို့ ဆီက
ဦးကြောင်ကြီးဆိုခေါင်းပါကြီးတယ်။ခေါင်းသေးတဲ့ကောင်တွေဘဲလုပ်စားပါတယ် အဲလိုလူတွေရဲ့ အောက်မှာ